संस्कृति मेलाको महिमा | Bishow Nath Kharel
संस्कृति मेलाको महिमा
कर मेलाको महिमा
काभ्रेको पनौतीमा माघे संक्रान्तिदेखि ऐतिहासिक बाह्रवर्षे मकर मेला प्रारम्भ भएको छ । एक महिनासम्म चल्ने यस मेलामा विदेशबाट समेत हजारौँ तीर्थयात्रीहरू आउँछन् । धार्मिक तथा सांस्कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको यस मेलाले स्थानीय जनताको सामाजिक-आर्थिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव त पार्ने नै छ, साथै पर्यटकीय हिसाबले पनि यस स्थानको प्रचार-प्रसारमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
काभ्रेको पनौतीमा माघे संक्रान्तिदेखि ऐतिहासिक बाह्रवर्षे मकर मेला प्रारम्भ भएको छ । एक महिनासम्म चल्ने यस मेलामा विदेशबाट समेत हजारौँ तीर्थयात्रीहरू आउँछन् । धार्मिक तथा सांस् कृतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको यस मेलाले स्थानीय जनताको सामाजिक-आर्थिक जीवनमा सकारात्मक प्रभाव त पार्ने नै छ, साथै पर्यटकीय हिसाबले पनि यस स्थानको प्रचार-प्रसारमा मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
दसैंको सामाजिक, सांस्कृतिकं एवं आर्थिक महत्व
अधिकांश नेपालीको प्रमुख पर्व हो-दसैं। यो शरद ऋतुको आश्विन शुक्ल प्रतिपदादेखि पूणिर्मासम्म मनाइए पनि मुख्यतः १० दिन मनाइन्छ, जसमध्ये विशेष महत्त्वका साथ मनाइने अवधिलाई नौरथा भनिन्छ। नौरथाभित्र गरिने विविध क्रियापलापले नै दसैंको सार रूप इ·ति गर्छ। जनस्तरमा हर्ष र उमंगको वर्षा गराउने दसैंको धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व त छँदै छ त्यसबाहेक सामाजिक एवं आर्थिक रूपले पनि यसले उत्तिकै महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्ने गरेको छ। विशेषगरी यो पर्वको प्रकट र लुप्त गरी दुई प्रकार्य हुन्छ भन्छन् पद्मकन्या बहुमुखी क्याम्पसका समाजशास्त्रका सह-प्राध्यापक नेत्र ओझा। उनका अनुसार दसैंमा राम्रो लुगा लगाउने, पूजापाठ गर्ने, टीका लगाउने, आफन्तकहाँ जाने, विभिन्न प्रकारका पौष्टिक पदार्थ खानेजस्ता क्रियाकलाप प्रकट हुने प्रकार्य हुन्। सरसर्ती हेर्दा यी क्रियाकलापलाई निश्चित समुदायको धार्मिक परम्परासँग जोडिए पनि यी प्रकट कार्यमा लुप्त अर्थ अर्थात् निहीतार्थले मानवका सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक आदि पक्षलाई समेटेका हुन्छन्। शारदीय पूजापाठले मानिसमा आध्यात्मिक भाव वृद्धि गर्छ, सत्मार्गमा हिँड्न प्रेरित गर्छ अनि वर्षभरि काम गर्दा लागेको थकाइबाट मुक्त गरी मानसिक एवं शारीरिक रूपमा तरोताजा बनाउँछ। टीका लगाउन इष्टमित्रकहाँ जाने प्रचलनले मानिसलाई लामो समयदेखि भेट हुन नसकेका तथा अन्य समयमा खासै नगइने आफन्तकहाँ पुर्‍याउँछ। यसबाट सामाजिक व्यवहार चल्छ। एकता अनि अपनत्वको भाव विकसित हुन्छ। त्यसैगरी दसैंमा खाइने मासुजन्य तथा अन्य पौष्टिक पदार्थभित्र पनि शारीरिक स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित अर्थ लुकेको छ। नेपाल कृषिप्रधान देश हो र यहाँका किसानहरूले वर्षामा बालीनाली लगाइसकेपछि काम गर्दा लागेको थकाइ तथा अत्यधिक परिश्रमबाट शरीरमा आएको कमजोरी भगाउन यस्ता पौष्टिक पदार्थ सेवन गर्छन्। यसरी दसैंसँग धेरै कुरा एकसाथ जोडिएर आएको पाइन्छ।
ओझाले भने झैं दसैंका दुई प्रकार्य हुन्छ भन्छिन्-सह-प्राध्यापक मोनिका तिमल्सेना। आसाममा जन्मे-हुर्किएकी मोनिका विवाहपछि नेपाल आएकी हुन्। आसाम र बंगालको दसैं मनाउने चलनसँग सुपरिचित मोनिका नेपालमा दसैंका बेला अत्यधिक बलि दिइने र बढी मासु खाने चलन उता भने नभएको बताउँछिन्। अन्य कुरामा भने दसैं मोटामोटी रूपमा सबैतिर उस्तै हो भन्ने उनको अनुभव छ। प्रकट क्रियाकलापमा स्थानअनुसार केही फरक देखिए पनि दसैंको मूल मर्म भने एउटै छ र त्यो हो असत्यमाथि सत्यको विजय। दसैंलाई उनी मिलनको पर्व भन्न रुचाउँछिन्। मोनिकाका अनुसार दसैंमा निधारभरि रातो अक्षता लगाउने चलन नेपालीहरूको मौलिक परम्परा हो। कुनै बेला निधारमा रातो टीका लगाउने चलन कहाँ-कहाँ छ भन्ने कुरा हेरेरै त्यति भू-भागलाई नेपाल भनेर चिनिन्थ्यो भन्छिन् उनी। दसैंमा तीजमा जस्तो परिवर्तनको प्रभाव नपरे पनि समयअनुसारको विश्वव्यापीकरणको प्रभाव परेको कुरा बताउँदै मोनिका भन्छिन्, अहिले त स्काइपीबाट टीका लगाउने चलन समेत आइसकेको छ। मोनिकाका अनुसार समयको गतिसँगै परिवर्तन हुँदै गएपछि दसैंले समाजमा छुट्टै तर· पैदा गर्छ र उत्सवमय वातावरण सिर्जना गर्छ।
दसैंमा गरिने पूजा वा साधनाभित्र एक प्रकारको संस्कृति नै समाहित भएको छ। नौ दिनसम्म भगवतीको विशेष पूजाआजा गर्ने तथा दसौं दिन प्रसादस्वरूप टीका र जमरा ग्रहण गर्ने चलनमा धार्मिक पक्ष मात्र नभै आफूभन्दा ठूला मानिसका हातबाट टीका र जमरा लगाई आशीर्वाद लिने संस्कृतिकै विकास भएको छ र यो नेपालको मौलिक संस्कृति हो। महाकाली, महालक्ष्मी एवं महासरस्वतीको पूजा-आराधना गरेर जन्मजन्मान्तरका लागि शक्ति आर्जन गर्न सकिने विश्वासले नेपालीहरुको मनमा विशेष सांस्कृतिक प्रभाव पैदा गरेको छ। पौराणिक साहित्यहरूमा वर्णन गरिएअनुसार पनि राम, कृष्ण आदिले शक्ति प्राप्त गर्न देवीकै आराधना गरेका थिए। त्यसका साथै मातृशक्तिका रूपमा पूजा गरिने देवीहरूको पनि कल्पना गरिए वा ती त्यतिबेला मातृसत्तात्मक परिवार रहेका बेलाका शक्तिशाली लोकमाताहरू थिए। यसरी कल्पना गरिएका देवीहरू पनि मातृत्व, र्ऊवरता वा सिर्जनशीलताका कारण सम्मानित भएका थिए। र्ऊवरा शक्ति एवं धैर्य, सहनशीलताजस्ता स्वभावका कारण नारीलाई पृथ्वीसित तुलना गरेर पूजा गरिने गौरवमय आर्य संस्कृति दसैंका माध्यमबाटै जीवित रहन सकेको धारणा छ संस्कृतिविद् प्रा.डा. वीणा पौड्यालको। नत्र त मानव जातिको आजसम्मको इतिहास हेर्दा नारीहरू गौण रूपमा वा पुरुष जातिको स्वार्थसिद्धिका साधनका रूपमा रहेका पाइन्छन् तथापि दसैंले धेरै हदसम्म नारी जातिको इज्जत वा प्रतिष्ठालाई सर्वोपरि मान्न सिकाएको उनको ठहर छ। नारी मातृदेवता हुन् वा ‘मातृ देवो भवः’ भनेर सिकाउने संस्कृतिका अनुयायी हौं हामी। हाम्रो संस्कृतिले नारी जातिलाई माताका रूपमा स्थापित गरेर यो रहस्य उद्घाटन गरेको छ कि नारीजाति पुरुषको कामोपभोगका वस्तु होइनन्, अपितु वन्दनीया एवं पूजनीया हुन्। त्यसैले पनि मानव धर्मशास्त्रमा जननीको गौरव गुरुभन्दा लाख गुना र पिताभन्दा हजार गुना बढी मानिएको छ। नारीलाई सदा अबध्या बताइएको छ, कुनै पनि वर्गकी, सम्प्रदायकी वा कुनै पनि प्रकारकी नारी सदैव पूजनीया हुन्छिन् किनभने नारीका अ·अ·मा देवताको बास हुने कुरा शास्त्रमा उल्लेख छ जुन कुरा हाम्रो संस्कृतिको अंग बनेर विभिन्न चाडपर्वका रूपमा प्रस्फुटित भैरहेका छन् र दसैं त्यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो भन्छिन् डा. प्रा. पौड्याल। उता लोकसाहित्यका मूर्धन्य अध्येता प्रा. डा. मोतीलाल पराजुली दसैंले मान्यजनलाई आदर एवं सम्मान गर्ने संस्कृति सिकाएको धारणा व्यक्त गर्छन्। दसैंका बेला जसरी भए पनि मान्यजनका हातबाट टीका थाप्ने चलनले आफूभन्दा ठूलाको आशीर्वाद लिन सिकाएको छ। ठूलाबडाको आशीर्वादले आत्मबल वृद्धि हुने र सत्मार्गतिर लाग्ने प्रेरणा समेत प्राप्त हुन्छ जुन दसैंका माध्यमबाट सम्भव हुन्छ। डा. पराजुलीका अनुसार दसैंले नारीशक्तिलाई पूजा गर्ने संस्कृति विकास गरेको छ। हामीकहाँ जीवित देवीका रूपमा कुमारीको पूजा गर्ने चलन अद्यावधि छँदै छ जसले नारीशक्तिलाई सम्मान गर्न सिकाउँछ। यसैगरी हरेक शुभकार्य गर्दा कन्या पूजा गरिने तथा दसैंका बेलामा नवदुर्गा भवानीको प्रतीक मानेर नवदेवीहरूको पूजा गर्ने परम्परा छ। लोकसमाजतिरै दृष्टि दिने हो भने पनि कुनै घर बिग्रनु र सप्रनुमा नारीकै हात रहेको देखिन्छ। नारीहरूले संरक्षण गरिदिँदा पुरुष समृद्ध हुने र नगरिदिँदा कंगाल हुने कुरा लोक व्यवहारबाटै पुष्टि भएका वा हुने कुरा हुन्। नारीले आँटे एकैछिन, पुरुषले आँटे वर्ष दिन भन्ने उखान त्यसै चलेको होइन।
दसैं सामाजिक गतिविधिका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण छ। टाढाटाढा गएकाहरू समेत दसैंका लागि भनेर नै घर र्फकने र परिवार, गाउँ, टोल एवं छरछिमेकीसित भेटघाट गर्ने परम्पराका कारण दसैंले सामाजिक सम्बन्धलाई बढावा दिन उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गरेको छ। त्यसैगरी बहुजातीय, बहुधार्मिक एवं बहुभाषिक नेपालमा सबैजसोले आपसी सद्भाव नबिथोली रमाइलो गर्छन्। तसर्थ दसैंको सामाजिक महत्त्व पनि कम छैन। उप-प्राध्यापक ओझाका अनुसार दसैंले नेपालीहरूबीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ। एकअर्कालाई शुभकामना आदानप्रदान गर्ने मात्र नभै एकअर्काकहाँ गएर खानपिन गर्ने, जमघट गरेर मनोरञ्जक क्रियाकलाप गर्ने जस्ता कार्यले आपसी सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ। यसरी दसैंको सांस्कृतिक परम्पराले सामाजिक सद्भावमा उल्लेख्य वृद्धि गर्छ। विदेशमा गएकाहरूले पनि त्यही जमघट अनि रमाइलो गरि दसैं मनाउँछन् । यसो गर्दा विदेशी भूमिमा पनि नेपालीहरूबीचको एकता प्रकट हुन्छ। यसरी दसैंले नेपालीहरू एक भएको सन्देश विश्वभर प्रवाहित गरिरहेको हुन्छ।
दसैं आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिले पनि निकै महत्त्वपूर्ण पर्वका रूपमा परिचित छ। नेपालका सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा लामो बिदा हुन्छ। दसैं मनाउन भनेर बिदा मात्र दिइँदैन, सबैजसो कार्यालयले कर्मचारीलाई बोनस पनि वितरण गर्छन्। दसैंका अवसरमा खाद्यान्न, वस्त्र आदि उपभोग्य सामग्रीहरूको व्यापार पनि उल्लेख्य वृद्धि हुन्छ। वर्ष दिनसम्म गरिएको दुःख भुल्न मानिसहरू दसैंमा कत्ति पनि नडराई खर्च गर्छन्। जस्तोसुकै सामान्य मानिसले पनि औसतभन्दा बढी खर्च गर्छन्। अझ हिजोआज त यही मौका छोपेर स्वदेश एवं विदेशको भ्रमणमा निस्कने चलन पनि बढ्दो छ। यसले गर्दा पर्यटकीय दृष्टिले पनि दसैंको समय राम्रो मानिन्छ। दसैंमा हुने अत्यधिक आर्थिक क्रियाकलापले अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्छ।
अधिकांश नेपालीले मनाउने पर्व भएका दसैंले नेपाली समाजमा प्रभावकारी उपस्थिति देखाउँछ। धार्मिक आस्था बोकेकाहरूले मनाउने र अरूले मनाउने तरिकामा फरक देखिन्छ दसैं। फेरि यही समाजमा बसेर दसैं नमनाउनेहरू पनि पर्याप्त छन् तिनलाई पनि दसैंले कुनै न कुनै रूपममा छोएको भने अवश्य छ। मनाउने तरिका, मनोरञ्जन गर्ने तरिका वा बलि दिने तरिकामा जे-जस्तो विविधता भए पनि दसैंभित्रको सन्देश यसलाई मनाउनेजति सबैले उस्तै वा उही रूपमा ग्रहण गरेका हुन्छन् जुन दसैंको सबैभन्दा ठूलो विशेषता मान्न सकिन्छ।